अवलोकनकर्ताको उपस्थिति उत्साहजनक छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता अवलोकनकर्ताको उपस्थिति उत्साहजनक छ
on: January 31, 2019 अन्तरवार्ता
अवलोकनकर्ताको उपस्थिति उत्साहजनक छ
रञ्जित पोद्दार, महासचिव, क्यान महासंघ
व्यवस्थापन तथा प्रविधिको हिसाबले यसपटकको मेलामा विगतको भन्दा के फरक छ ?
मेला प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने गरे पनि यो प्रविधिको क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ विकास भइरहेको हुन्छ । १ वर्ष अवधिसम्ममा ल्यापटप, मोबाइल, ड्रोन, टीभी, प्रिन्टिङ मेशिन लगायतमा धेरै प्रविधि भित्रिएका हुन्छन् । यस्ता उपकरणको बाहिरी सामानमा परिवर्तन नभए पनि भित्री सामानमा परिवर्तन भएको हुन्छ । जस्तै– ल्यापटपको बाहिरी रङ ५ वर्षदेखि उस्तै भए पनि र्‍याम, डिजाइन लगायतमा फरक पर्छ । विगतका मेलामा मोबाइलका हार्डवेयरमात्र राखिन्थे भने यसपटक हार्डवयेर र सफ्टवयेर दुवैलाई समावेश गरिएको छ ।
मेलामा बैंकिङ, इन्टरनेट तथा विभिन्न नेपाली युवाद्वारा निर्मित प्रविधि पनि राखिएका छन्, जसले अवलोकनकर्तालाई जानकारी र मनोरञ्जन समेत प्राप्त हुन्छ । मेलाको यसपटकको संस्करणमा स्मार्ट भिलेजको परिकल्पना, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगबारे जनचेतना पुर्‍याउने जस्ता विषयमा पनि सोचेका छौं । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि समेट्न खोजेका छौं । मेलामा गेमिङ जोन लगायत मनोरञ्जनका साधनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी रोबोर्टको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नेपाली युवाले बनाएका प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ल्यापटप, विभिन्न उपकरण, इन्टरनेट कम्पनी, टेलिभिजन, सीसी क्यामेरा र अन्य सामान पनि छँदै छन् । विगतको भन्दा अहिलेको मेला प्रविधिमय बन्दै गएको छ । यसमा आईटी तथा इन्जिनीयरिङ स्कूल/कलेजको सहभागिता समेत बढेको छ ।
मेला प्रविधिका सामानको प्रदर्शनी भन्दा पनि विक्री गर्ने थलो बन्ने गरेको देखिन्छ नि ?
मेलामा क्यान महासंघको उद्देश्य खासगरी प्रदर्शन नै हो । तर व्यवसायीको हक र उपभोक्ताको भनाइमा सामान किन्न–बेच्न पाउनुपर्छ । महासङ्घले यो मेला सामान विक्री गर्ने माध्यमको रूपमा आयोजना गरेको होइन । ब्रान्ड प्रवर्द्धनका लागि समेत हामीले मेला आयोजना गर्दै आएका हौं । मेलामा सहभागी कम्पनीले विभिन्न अफर तथा छूट सहित प्रविधिका सामान विक्री गर्ने गरेका छन् । मेलामा सहभागी कम्पनीहरूलाई हामीले आफ्ना सामानको विक्रीभन्दा प्रदर्शनी र प्रमोशनमा केन्द्रित हुन भन्दै आएका छौं । जनमानसको मुख्य सोच भने यहाँ आएर केही सामान खरीद गर्ने हुन्छ ।
मेलामा अवलोकनकर्ताको सहभागिता कस्तो छ ? कुन सामानमा बढी आकर्षण छ ?
बुधवार मेलाको तेस्रो दिन हो । आजसम्मको अवस्था हेर्दा मानिसको उत्साह धेरै छ । सूचना प्रविधि सबैको चासोको विषय र दैनिक जीवनको आवश्यकता भएको प्रमाण यही क्यान मेलाबाट पनि देख्न सकिन्छ । खासगरी अहिले मेलामा ड्रोन, ल्यापटप, साना पेनड्राइभ र प्रिन्टिङ मेशिनमा अवलोकनकर्ताको आकर्षण बढी छ । सुबिसु लगायतका अन्य स्टलमा अफरका कारण मानिसको भीड देखिएको छ । त्यस्तै विभिन्न टेक्नोलोजी कलेजका विद्यार्थीले बनाएको रोबोट र स्मार्ट स्कूलको परिकल्पनामा पनि मानिसको चासो देखिएको छ ।